KA HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ARBACO 24-KA LUULYO 2019-KA
Wednesday July 24, 2019 - 10:11:53 in Wararka by Mogadishu Times
MADAXWEYNE FARMAAJO OO KA HADLAY GUUSHA BORIS JOHNSON Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/hi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Bor is Johnson oo ku guuleystay jagada Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska. Joh
MADAXWEYNE FARMAAJO OO KA HADLAY GUUSHA BORIS JOHNSON Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed C/hi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Bor is Johnson oo ku guuleystay jagada Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska. Johnson oo mar soo noqday duqa caasimadda London ayaa xilkan kaga gu uleystay wasiirka arrimaha dibadda ee Je remy Hunt. Madaxweyne Farmaajo ayaa u rajeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ingi riiska inuu ku guuleysto waajibaadka cu sub ee uu ku hoggaamin doono Boqorto oyadda Ingiriiska.
"Waxaan eegaynaa inaan kula shaqey no si aan u xaqiijinno mustaqbalka wanaa gsan ee aragtida 2deena dal." ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo qoraal kooban ku baahiyay bogga twitterka.
R/wasaare Boris Johnson , oo horey is aga casilay wasiirka arrimaha dibadda ay aa bartamihii bishii March ee sannadkii 2017 ka booqasho ku yimid caasimadda muqdisho, xilligaa oo uu la kulmay madax weyne Farmaajo.
Maalinta Arbacada ayuu la wareegi doo naa Boris Johnson , xafiiska ra'iisul wasaa raha Ingiriiska isagoo xilka ka beddelaya Theresa May oo shaqada ka tagtay markii ay wadi wayday barnaamijka ka bixitaanka Midowga Yurub ee Brexit, iyada oo caqab ada ugu weyn ee horyaalla ra'iisul wasaa raha cusub ay ka mid tahay meelmarinta heshiiska bixitaanka Midowga Yurub oo ra' iisul wasaareyaal iyo wasiirro ay isku casileen.
DONALD TRUMP OO CODSI U DIRAY HAWE ENKA LAGA TIRADA BADAN YAHAY EE KONGAREESKA
Madaxweynaha dalkaasi waxa uu ku tal laabsaday inuu weerar kale ku qaado Afar ta Haweenka midabka leh ee ka tirsan Ko ngareeska, kuwaasi oo had iyo jeer naq diya Siyaasadiisa. Qoraal uu Twitterkiisa soo dhigay waxa uu u baaqay Xildhibaan adaasi inay raalligelin bixiyaan, iyagoo ku tilmaamay inuu yahay Cunsuri. "Ma rume ysani inay afartaasi Haweenka ka tirsan Kongareeska jecel yihiin Dalkeenna. Waa inay raalligelin siiyaan Maraykanka iyo Isr ael waxyaabaha nacaybka leh ee ay shee geen. Waxay burburinayaan Xisbiga Dim uqraadiga, laakiin waa tabar daran yihiin iyo dad aan la aamin Karin ma burburin karaan Qarankeenna Weyn"ayuu Trump ku yiri Bartisia Twitterkiisa. Dhinaca kale, Trump waxa uu isbuucii hore soo dhigay Twitterkiisa qoraal uu ku sheegay inay Haweenka Xisbiga Dimuqradaiga ee ka tir san Kongareeska dib ugu laabtaan dalalka ay horey uga yimaadeen, haddii aysan jecl ayn Maraykanka, waa sida uu hadalka u dhigay. Afarta Haween ee uu Trump weer arka afka ku hayo waxay kala yihiinIlhan Omar, Rashiida Dalayba, Ayaanna Pressl eyiyo Alexandria OcasioCortez,kuwaasi oo si wadajir ah u naqdiya Siyaasadda Tru mp iyo Israel. Si kastaba ha ahaatee, Haw eenka Xildhibaanadda ka tirsan Kongare eska Maraykanka weli kama aysan jawa abcelin hadalkii Trump ee ahaa inay Raa lligeliyaan siiyaan Maraykanka iyo Israel.
GEN. MUUNGAAB OO DOWLADDA KU EEDE EYAY INAY KU FASHILANTAY AMINGA MUQDISHO
Guddoomiyaha Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka Gen. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa waxaa si kulul u Camba areeyay Qaraxii daraad ka dhacay M/ Muqdisho gaar ahaan Wadadda aa dda Garoonka Diyaarada ha Caalamiga ah ee Aad an Cadde. Gen. Muungaab ayaa dadkii ku dhintay qaraxaas waxaa uu Alle uga bar yay inuu Jannada ka waraabiyo,halka ku wii ku dhaawacmay uu Caafimaad deg deg ah siiyo.
Sidoo kale Guddoomiyaha Xisbiga Ca ddaaladda iyo Horumarka ayaa Alle uga baryay inuu badal qeyr leh siiyo dadkii ku hanti Beelay qaraxii loo adeegsaday gaari ga ee ka dhacay BarKoontarool oo ku taa lla Waddada aadda Garoonka Diyaarada ha Aadan Cadde. Dhinaca kale Gen. Xas an Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa Madaxda dowladda Soomaaliya ku eede eyay inay ku fashilmeen sugida Aminga Caasimadda.
"Waxaa Xaqiiqo ah in Amnigii Caasim adda Muqdisho uu Faraha ka baxay, ayna shaqeyn waayeen qorsheyaasha Dowlad da hadda jirta ee kaliya Magaalada ka dhi gay Xabsi kor ka furan, nolosha Shacab kana ciriiriga gelisay, balse wax ka ka qa ban weeyday sugidda Amniga Muwaadini inta Soomaaliyeed. Mana muuqato wax Horumar ah oo Hay'adaha Amniga Xuku umadda ka gaareen Sugidda Amniga, Si doo kale Ma aragno isla xisaabtan dhab ah oo ku wajahan Hay'adaha Dowladda dhexdooda, taas bedelkeedana waxaa Darajo iyo Abaal marin lagu bixinayaa Fa shilka lagu dhex jiro"ayuu yiri Gen. Muung aab. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa daraad ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qar xa,waxaana ku geeriyooday 17 ruux oo is ugu jiray Askar ka tirsan Ciidanada dowlad da iyo dad shacab ah,halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen,waxaana Mas'uuliyad iisa sheegtay Alshabaab.XigashoRaadioDalsan.com
DOWLADA TURKIGA OO CAMBAAREYSAY QAR AXII KA DHACAY DARAAD MOGDISHU
Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dal kaasi waxay sheegtay inay si kulul u cam baaraynayaan Weerarkii Isqarxinta ee daraad ka dhacay M/Muqdisho, kaasi oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Hadalqoraal oo ay Wasaarad du soo saartay waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin khasaaraha ka dhashay Qar axaasi, oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 10qof, kuna dhaawacmeen dhowr kale.
"Waxaan Naxariista Allaah u rajeyna ynaa kuwii naftooda ku waayey qaraxaasi iyo inay si degdeg ah u bogsadaan kuwii ku dhaawacmay" ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Turkiga. Dhinaca kale, Dowladda Turkiga waxay sheegtay inay tacsi Saxaiibtinimo iyo mid Walaaltinimo u dirayaan Dowladda FS iyo Dadka Soomaaliyeed.
SHIL SABABAY DHIMASHO IYO DHAAWAC OO KA DHACAY DULEEDKA WARSHEEKH
Wararka Idka imaanaya Gobolka Shabe ellaha Dhexe gaar ahaan deegaan hoost aga Degmada Warsheekh ayaa waxaa ay sheegayaan in shalayy halkaas uu ku Rog maday gaari kuwa Xamuulka qaada ah.
Gaarigaas Rogmaday ayaa waxaa la sheeg ay inuu ah aa nooca Soomaalida u taqaa no TII AM,kaasi oo ka soo ambabaxay M/Mu qdisho, waxaana uu gadoomay xili uu mar ayay Tu uladda lagu magacaabo Gumarr oow oo hoostagta Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka deegaanka oo la hadlay Warbaahinta Muqdisho ayaa u sheegay in Shilkaas uu ka dhashay Khasaaro isugu ji ra dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii gaariga saarnaa,waxana halkaas ku Geeriyooday hal ruux,sidoo kalena 6 qof ay ku dhaawacmeen.
Goobta uu gaariga ku Rogmaday ayaa waxaa gaaray dadka deegaanka,kuwaasi gurmad deg deg ah u sameeyay dadkii hal kaas ku waxyeeloobay,waxaana dadka dhaawacmay loo soo qaaday dhanka Mag aalada Muqdisho si loogu daaweyo.
Si kastaba gaariga Rogmaday oo ahaa nooca Soomaalida u taqaano TII AMka ayaa waxaa uu waday Allaab iyo Bagaash noocyado kala duwan ah oo u rarnaa dad ganacsato ah,isla markaana waxaa uu kusii jeeday Deegaanka Maseggawaay oo ka tirsan Gobolka Galgaduud
MAREYKANKA IYO PAKISTAN OO KA WADA HADLAY DAGAALKA KA SOCDA AFGANISTAN
Madaxweyne Donald Trump iyo Ra’I sulwasaaraha Pakistan, Imran Khaan oo kulan ku yeeshay Aqalka Cad ayaa waxay isla ee geen xalka Siyaasadeed ee lagu soo afjari karo dagaalka 18ka sanno jirsa day ee ka soc da dalka Afganistan.
2da Hoggaamiye waxay kaloo Kulankooda kaga xaajoodeen sidii ay Maraykanka u soo celin lahaayeen Kaalmadda Dhaqaale ee ay siin jireen Pakistan.
Madaxweyne Trump waxa uu u she egay Ra’isulwasaaraha Pakistan inay su urtogal tahay in la soo celiyo Kaalmada dhaqaale ee dhamayd 1.3 Billion oo Dol lar, taasi oo uu Madaxweyne Trump haki yey sannadkii hore.
Ra’isulwasaaraha Pakistan waxa uu sheegay inay tageero ka geysan doonaan Dadaalka Wadaxaajoodka Nabadda ee Afganistan, isla markaana ay Ururka Daali baan ku boorin doonaan inay la hadlaan Dowladda Afganistan.
QARAX LALA EEGTAY KOLONYO AY LA SOCD EEN CIIDAMO KA TIRSAN ITOOBIYA
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo ayaa waxaa ku waramayaan in Kolo nyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan AMIS OM gaar ahaan kuwa Itoobiyaqarax lagu la eegtay degmo ka tirsan Gobolkaas.
Qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa Miino dhulka lagu aasay,waxaana Ciidamada lagula eegtay xili ay ku socda alayeen wadada xiriirisa deegaanka Yur kud iyo degmada Luuq ee Gobolka Gedo.
Sidoo kale qaraxa ayaa la tilmaamay in uu haleelay mid kamid ah gaadiidkii ay wa teen Ciidamada Itoobiya,kuwaasi ka yimid Gobolka Baay kuna siii jeeday Gobolka Gedo,isla markaana waxaa qaraxasi ka dhashay Khasaaro kala duwan.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku da rayaan in qaraxa,kadib dagaal xooggan uu dhexmaray Ciidamada Itoobiya iyo Alsha baab,kaasi oo socday muddo daqiqadaa.
Ilaa iyo hadda lama oga Khasaaraha ka dhashay qaraxii Ciidamada Itoobiya lagu la eegtay wadada xiriirisa deegaanka Yu rkud iyo degmada Luuq ee G/ Gedo.
Alshabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda waxaa ay ku sheegteen Mas’u uli yada qaraxaas,waxaana shabaab inta badan weeraro kala duwan ay ku qaada an Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM xiliyada ay socdaalka ku maraya an qeybo kamid ah Gobolada dalka.
WAQTIGA LA QABANAYO SHIRKA DIB U HESHIISIINTA GALMUDUG OO LA SHAACIYAY Guddiga Qabanqaabada Shirweynaha Dibuheshiisiinta Galmudug oo u xilsaa ran qaabkii xal waa ra looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho ee ka dhex jira bee laha Galmudug, wu xuu si weyn ugu faraxsan yahay in si habs ami leh ugu qabsoomay kulamadoodii hor dhaca ahaa ee dardar gelinta qorshaha geedisocodka shirweynaha dibuheshiisi inta intii u dhaxeysay 20–23ka July 2019.
Guddigu wuxuu bogaadinayaa Wasaa rad da Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dibuheshiisinta iyo dhammaan bulshada reer Galmudug magacaabista iyo taagee rada ay guddiga u muujiyeen si khilaafaad ka reer Galmudug xal waara looga gaaro.
Guddiga Wuxuu uga mahadnaqayaa mad axda sare ee dalka gaar ahaan R/Wasaa raha JFS hawshii baaxadda lahayd ee uu ka qabtay Galmudug muddadii afarta u sbuuc ahayd ee uu meelo badan oo ka mida degaannada Galmudug kula kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan , taa oo abuurtay jawi sahli kara in reer Galmudug ka heshiin karaan waxyaabihii soo dhex maray iyo dadaalkii mugga lahaa ee Ma amulka Dowlad Goboleedka Galmudug ka gaystay suurtagelinta jawi nabadeed.
Ugu danbayntii guddigu wuxuu bogaadi nayaa kulankii daraad ay la yeesheen wak iilada caalamka oo si buuxda u taageray geedisocodka Shirweyanaha Dibheshiis iinta Galmudug.
Intaa kadib, guddigu markii uu qiimeey ay xaaladda ka jirta deegaannada Galmud ug iyo baahida loo qabo in si deg deg ah loo fidiyo gogol dibuheshiisiineed oo lagu lafa guro isla markaana lagu xaliyo khilaa faadka bulsho ee deeagaanada Galmudug wuxuu go’aamiyay:
1.In ergooyinka ku matalaya beelaha wada dega Galmudug ee tira ahaan loo qo ondeeyay beel walba lagu soo xulo, waa yo aragnimo la xariirta arrimaha dibuhe shiisiinta kana kooban qaybaha kala duw an ee bulshada sida; hoggaamiyaasha dhaqanka, culimaa’udiinka, dhalinyarada, ganacsatada iyo haweenka.
In shirweynaha Dibuheshiisiinta uu ka dhaco magaalo madaxdada Dawlad Gobol eedka Galmudug ee Dhuusamareeb 5ta bisha Agoosto, 2019.
3.In ergooyinka shirweynaha loo qoo ndeeyay ay soo gaaran goobta shirka 1da Bisha Agoosto, si ay waqti ugu helaan dee gaan iyo kulamo gaargaar ah.
4.Guddigu wuxuu qoondeeyay in tirada gu ud ee ergooyinka kasoo qayb gelaya shir ka ay noqdaan (356) seddex boqol konton iyo lix ergo.
In Wasaaradda Arrimaha Gudaha, iya doo tixgelinaysa qorshaha guddiga ay diya ariso dhammaan tashiilaadka shirweyna ha iyo ergooyinka ay u baahanyihiin. 6.Gu ddigu waxa uu taageero buuxda way diisa nayaa DFS iyo Wakiilada Beesha Ca alam ka u fadhiya Soomaaliya kuna casuu ma yaa furitaanka shirweynaha.
Guddigu wuxa uu bulshada Galmud ug ugu baaqayaa in ay taageeraan kalana shaqeeyaan guddiga sidii uu Shirweynaha Dibuheshiisiinta Galmudug u guuleysan lahaa.
AFGHANISTAN OO MARKII U HORREYSAY QALAB CAAFIMAAD U SOO DHOOFISAY SOMALIA
Shabakadda Wararka ee wadsam.com waxay shalay qortay inay Afganistan mar kii ugu horreyay ay Somaliya u soo dhoof isay qalabka Daaweyntaiyo waxsoosaar ka dhinaca Nadaafadda.
Madaxa Rugta Ganacsiga iyo Wersh adaha ee Gobalka Heart ee Galbeedka dalkaasi, Xamiidullaahi Khadiim ayaa she egay in 25 nooc oo qal ab ka Daaw aynta oo ay Wershadda AsiaPharma loo diray dal ka Somalia. Waxa uu sheegay in Xamuu lka 1aad ka kooban yahay 3 Kontaynar ah oo midkiiba culayskiisu dhan yahay 30 Tan, oo ay ku jiraan 25 nooc oo qalabka Daaweynta ah.
Xamiidullaahi Khadiim waxa kale oo uu tillmaamay in qeyb ka mid ah Shixnad ahaasi ay mar hore gaareen Somaliya, halka 2da kale la soo marsiin doono Turk iga.
4 Shirkadaha Qalabka Caafimaadka ayaa ka hawlgala Gobalka Heart ee dalka Afganistan, iyadoo 6 kalena la aqoonsa day. Xigasho: wadsam.com
RA’ISULWASAARIHII SHIINAHA EE MAYALKA ADKAA OO GEERIYOODAY
R/wasaarihii hore ee dalka Shiinaha, Li Peng ayaa la sheegay inuu habeen hore ku geer iyooday Isbitaal ku yaalla M/ Pejing, inkastoo aan la shaac inin nooca uu yahay cuddurka uu u geriyooday.
Mr.Li Pen goo lagu naanay si jirey Kawaanlihii Pejing waxa uu ku ca an baxay Xukunkii Degdega ee la soo ro gay muddadii ay dibadbaxyadda Dimuqra adidooni ah ka dhaceen Fagaaraha Tiyan men oo ku yaalla bartamaha caasimadda dalkaasi ee Pejing.
Ciiddanka waxay xilligaasi dileen Boqol aal ka mid ah dadkii dhigayey Dibadbaxy ada, iyadoo Mr.Li Peng oo 91jir ahaa wa xa uu Xilka Ra’isulwasaarenimada ka de gay sannadkii 1988kii, ka dib, markii loo doortay Guddoomiyaha Xisbiga Shuuciga ee dalkaasi, wuxuuna hawlgab ka noqday Xisbiga sannadkii 2002dii oo qeyb ka ahayd in Hoggaamiyayaasha Jiilka cusub lagu wareejiyo Talada dalkaasi.
DOWLADDA QATAR OO KA DHIIDHISAY WARB IXINTII NYT EE LAGU XIRIIRIYEY QARIXII BOSAASO
Dowladda Qatar waxay gaashaanka ku dhufatay Warbixintii daraad lagu soo daabacay Warge yska The New York Times ee lagu muujiyey inay ku lug leedahay Qaraxyadda ka dhaca Som aliya, isla markaana ay taageero siiyaan Kooxaha Islaamiyiinta.
Warbixinta wargeyska waxaa lagu soo bandhigay Cod laga duubay Danjiraha Qat ar u jooga Somaliya iyo Ganacsade, iya goo ka wada hadlaya Qarax Bosaaso ka dhacay bishii May ee sannadkan, oo ay Kooxda Daacish sheegatay mas’u uliyadi isa.
Hadal ka soo baxay Xafiiska Isgaarsi inta ee Dowladda Qatar ayaa lagu sheeg ay in Siyaasadda Dibedda ee Qatar had iyo jeer ku dhisan tahay in la abuuro Dega naansho iyo Barwaaqo, isla markaana ay san marnaba faragelinin Arrimaha Daakhil iga ee dalalka madaxa bannaan.
"Somali gudaheeda, Imaaraadka inay le edahay Siyaasad Dibedeed oo ay ku doon ayaan inay ku maamulaan Somaliya, iya goo ku bedelanaya Taageero Maaliyade ed” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Dowladda Qataar.
Dhinaca kale, Dowladda Qatar waxay beenisay xiriirka ay la leedahay Ganacsad aha lagu magacaabo Khaliifa Kayad Almuhindi oo horey loo sheegay inuu aad u gu dhow yahay Amiirka dalkaasi, Sheekh Tamiim Bin Xamad Althaani.
"Khaliifa Kayad Almuhindi uma aha Lataliye nooc kasta Dowladda Qatar, ma na matalo Dowladda Qatar, xaqna uma la ha inuu hadalcelin ku bixiyo, isagoo matal aya magaca Dowladda Qatar” ayaa lagu yiri Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Isgaar siinta ee Dowladda Qatar.
Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in ay baari doonaan qofkaasi, isla markaana uu qaadi doono mas’uuliyadda hadalkii uu bixiyey.
Dowladda Qatar waxay mar kale ku celisay inay Somalia saaxiib muhiim u tah ay Qatar, isla markaana aysan faragelinn Arrimahooda Daakhiliga.
"Xiriirkeenna aan la leenahay Somalia waxaa asaas u ah Isxushmayn wadajir ah iyo danno guud, waxaana rajeynaynaaa wanaag DFS iyo dadka, waana sii wadi do onaa Taageeradooda ilaa Deganaansha ha laga dhowrayo” ayey Dowladda Qatar ku tiri qoraalka ay soo saartay. Ugu damb eyntii, Dowladda Qatar waxay sheegtay inay ka codsadeen Wargeyska The News York inay ka taageeraan Baar itaanka Eedeymaha ay qoreen, balse, Ma amulka wargeyska wey ku gacan sayreen arrintaasi.
MADAXWEYNE KUXIGEENKA PUNTLAND OO SHALAY SHIR DAAHFURAY
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Md. Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa M/Qardho ka daahfuray Shirka dib u eegi sta adeeg bixinta baahsan ee degmooyin ka, guulaha la gaaray iyo caqabadaha Jira.
Shirkaan waxaa Mad axweyne Kuxigeen ka ku wehlinayey , xubno ka tirsan golaha Wasiirada, Agaasi mayaasha guud, gudd oomiyayaasha deg mooyinka, howl wadee nno kale oo ka socday Puntland iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne Kuxigeenka ayaa shirka khudbad uu ka jeediyay waxa uu ku dheer aaday muhiimadda shirkaan looga hadla yo horumarinta degmooyinka Puntland.
"Waxaynu halkaan isugu nimid inaynu dib u milicsano howlihii sanadka 20182019 ee adeeg bixinta fidsan ee dowlaha hoose, wixii inoo qabsoomay, wixii inaka baaqday, Caqabadaha jira iyo xal u hellidd ooda iyo hiigsigeena Mustaqbalka”. Ayuu yiri Md Axmed karaash.
Md.karaash. ayaa sheegay inay qab soomeen howlihii adeeg bixinta ee tijaaba da ahaa ee uu ka howlgalo mashruuca JPLG, kaas oo ay iska kaashadaan Pun tland iyo hay’addaha Qaramda Midoobay, waxaana uu xusay in loo baahan yahay in dedaalka halkaasi laga sii badiyo.
Ugu dambayn, Md Axmed kara ash uu ka soo qayb galayaasha ku booriyay inay shirkaan haatan kasoo saaraan Talooyin ku aaddan sidii loo gaadhi lahaa adeeg bi xin baahsan oo laga hirgaliyo dhammaan degmooyinka, taas oo ay taageerayso da wlada dhexe ee Puntland.
GUDDIGA DOORASHADA JUBBALAND IYO QAAR KAMID AH MUSHARAXIINTA OO KULAN YEESHAY
M/ismaayo ee Caasimadda dowlad Go boleedka Jubbaland ayaa Shalay waxaa kulan ku yeeshay Guddiga Xudduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland iyo qaar ka mid ah Musharaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha Jubbaland.
Kulankaas oo ahaa mid Casuumaad ah oo loo fidiyay Musharaxiinta Madaxweyn aha ayaa waxaa looga hadlay habraaca doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Jubbaland.GX iyo Doorashooyinka Jubbal and ayaa Maa nta Magaalada Kismaayo ka bilaabay Isdiiwaangelinta Musharaxiin ta u tartameysa xilka Madaxweynaha Jubbaland,isla mar kaana waxaa Shalay isdiiwaan geliyey ilaa 2 musharax.
Bisha soo socota ee Agoosto ee San adkan 2019, ayaa la filayaa in Magaalada Kismaayo lagu qabtay Doorashooyinka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo mida Madaxweynaha Jubbaland.
MAXKAMADA BOOSAASO OO GO’AAN KA GA ARTAY GUDDIGII LOO XIRAY INAY LACAG KA QAATEEN DF
Waxaa shalay dib xoriyadooda u hel ay qaar ka mid ah xubnihii gudigga dayactirka wadada magaalada Boosa aso kuwaas oo dha waan xabsiga loo taxaabay ka dib markii ay lacag u soo dirtay dawlada federaalka ah ee Soo maaliya taas oo loogu talagalay horumar inta Magaalada Boosaaso.
Gudigga ayaa shalay lasoo taagay maxkamada derajada koowaad ee M/Boo saaso taas oo dib xoriyadooda u siisay.
Guddiga oo shir jaraaid qabtay sii daynto oda ka dib waxay sheegeen in si wanaag san loola dhaqmay ayna diyaar u yihiin inay sii wadaan dhamaystirka mashruu caas.
Waxay ummada soomaaliyeed iyo ku wa reer Puntland ugu baaqeen in ay midoobaan oo gacmaha is qabsadaan.
Maxakamada ayaa shalay xukuntay in la cagta hartay ay dawladu maamuli doonto, gudigguna waxay sheegeen in duqa degm ada Boosaaso uu iyaga digreeto ku mag acaabay ayna wadashaqayn doonaan.
TURKIGA OO SHEEGAY INUU GARABTAAGANYAHAY SOOMAALIYA KADDIB WEERARKII DARAAD
Dowladda Turkiga ayaa si adag u cam baareysay weerar qarax ah oo galinkii ho re ee Isniintii daraad ka dhacay koontarool ka 1aad ee garoonka diy aaradaha ee Aadan Cadde.
Dad ka badan toban ruux ayaa weerarka oo loo adeegsaday gaari waxy aabaha qarxa laga soo buuxiyay ku geer iyooday, halka ku dhowaad 40 ruux ay ku dhaawacme en."Waxaan Naxariista Allaah u rajeynay naa kuwii naftooda ku waayey qaraxaasi iyo inay si degdeg ah u bogsadaan kuwii ku dhaawacmay." ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga. Dowladda Turk iga waxay sheegt ay inay tacsi saaxiibtinimo iyo mid walaal tinimo u dirayaan dowladda Federalka iyo dadka Soomaaliyeed. Kooxda AlShabaab ee xiriirka la leh Al Qa
acida ayaa sheegatay mas'uuliyada qara xa.
KULAN LOOGA HADLAY QOONTADA HAWEEN KA EE GOLAYAASHA DOWLADDA OO MUQDISHO KA DHACAY
Kulanka oo ay ka qeybgaleen xildhiba anada haweenka ah ee ku jira labada Aq al ee BFS ayaa lagu baaqay in la ilaa liyo Qoontada Hawe en ka ee guud ahaan ba Golayaasha dowlad da.Kulanka oo ay soo qabanqaabisay hay 'ad lagu magacaabo Baxnaanno ayaa mar kii uu soo dhamaaday waxaa laga soo sa aray Warmurtiyaad la xiriira ilaalinta ilaal ita ka qeybgalka siyaasadda iyo Golayaa sha Dowladda :
Wurtiyeedka ayaa u dhignaa siddan :
''Annagoo ah Xildhibaanada haweenka ah ee ku jira goloyaasha baarlamanka Dow ladda federaalka Soomaaliya sida Golaha shacabka iyo aqalka sare ee dalka wax aan soo dhoweyneeynaa sida dowladdeen na uga go’antahay illaalinta iyo dhaqan galinta kootada haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin matalaadda golayaasha um madda soomaaliyeed
Waxaan sidoo kale Soojeedineynaa in haweynka soomaaliyeed lagu garabsiiyo sidii ay kaalin fir fir coon uga qaadan laha ayeen dhammaan dhinacyada Bulshada ama siyaasadda , sarana loo qaado kaa lintooda matalaadda siysaadda
Waxaan ka marqaati ka ceynaa in ha weenka soomaaliyeed ee siyaasadda ku ji ra kaalin wax ku ool ah ay ka qaateen ge eddi socodka Siyaasadda Soomaaliya ta as oo muujineeysa sida dumarka soomaa liyeed ay uga go’antahay horumarinta dad ka iyo dalka Soomaaliyeed
Innaga oo xasuusan kaalinta ay ka soo qaateen Haweenka Soomaaliyeed bad ba adinta dalka iyo qoysaska soomaaliyeed intii dalka Bur burka ku jiray waxaan ku ba aqeynaa :
1.Inaan la’siyaasadeen Kootada haween ka Soomaaliyeed oo diyaar u ah in muruq iyo maskax ay ku bixiyaan dibu dhiska Dalka Soomaaliya
2. Waxaan ku baaqeeynaa in sare loo qa ado kaalinta iyo Matalaadda haweenka So omaaliyeed ay ku leeyihiin dhammaan goloyaasha Dwoladda Federaalka Soo maaliyeed iyo maamul Goboleedyada
3. Waxan ku baaqeynaa in hormuud ay u noqdaan haweenka dadaalada hadda so cda ee dalka looga gudbinayo marxaladda uu ku jiro
4.Waxaan ku baaqeeynaa dhismaha gud di haweyn ah oo ka shaqeeya sare u qaad ista codka Haweenka Soomaaliyeed
1.Waxaan ballan qaadeynaa haddii aanah ay haweynka ku jira goloyaasha Dowladda Federaalak Soomaaliya in aan hormuud ka noqonno dadaalada dibudhiska iyo dibu heshiisiinta ah ee dalka uu u baahan yahay
2. Waxaan ballan qaadeynaa in kaalin wax ku ool ah aan ka qaadano isla fal galka iyo wada shaqeynta hay’adaha dwol adda federaalak Soomaaliya
3. Waxaan ballan qaadeynaa in haweenka soomaliyeed aan gacan ku siinno sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen wacyigooda wax barasho iyo kan hogaamineed
4. Ugu dambeyn waxaa ka codsaneynaa Dhalinyarada , Siyaasiyiinta , odoyaasha dhaqanka, Culuma’udiinka , Ganacsatada iyo ururada bulshada Rayidka ah in ay ga can nagu siiyaan sidii gabadha soomali yeed ay u qaadan lahayd kaalintooda ku aadan horumarinta bulshada.
MADAXWEYNAHA PUNTLAND OO KU BAAQAY IN LA BAARO WARBIXIN LAGU DAABACAY WARGEYSKA NEW YORK TIMES
Madaxweynaha dowladgobolleedka Pu ntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa shee gay inay muhiim tahay baaritaan lagu sameeyo waxa ka runta ah warbi xin uu baahiyay wargey ska New York Times ee ka soo baxa dalka Marekanka.
Wargeyska wuxuu warbixintiisa ku she egay dowladda Qatar inay wax ka ogtahay weerar bishii May ka dhacay M/dekedda leh ee Boosaaso, iyada oo abaabulka we erarka lagu doonayay in looga hor istaago Imaaraadka Carab joogitaankooda Boos aaso.
Wargeyska The New York Times ayaa daabacay in ay dhagaysteen sheekadda dhex martay ganacsade Qatari ah iyo safi irka Qatar ee dalka Soomaaliya. Ganac sade u dhashay dalka Qatar oo saaxib dhow la ah Amiirka Qatar ayaa la dhagays tay taleefan uu kula hadlay safiirka Qatar ee dalka Soomaaliya, isagoo sheegaya weerar qarax ah oo ka dhacay magaalada Boosaaso ay ka dambeeyeen malee shiyaad fulinaya danaha Qatar ee ah in Im aaraadka uu ka cararo magaalada Boosaaso.
Ganacsadaha ayaa intaasi raaciyay in khalalaasaha uu ahaa mid loogu talogalay in dadka ka jooga Imaaraadka Carabta ay magaalada Boosaaso ka cararaan oo aysan dib dambe u cusbooneysiin qandar aasyada ay ku joogaan dekedda Boos aaso. "Waxaan qirayaa inuu xaqiiqo yah ay warka lagu daabacay New York Times ee looga hadlayay dilal iyo qaraxyo ka dhac ay Boosaaso kuwaas oo la sheegay inay dowladdu nagu dul hardamayaan,.. gol aha Shacabka iyo Aqalka sarre waxaan ka codsan inay baaritaan kusameeyaan ari ntaas." ayuu yiri madaxweyne Deni oo go or dhow hadalkan ka sheegay bandhigga carwada buugaagta ee Garoowe ka furmay.
AXMED BUUX OO LOO MAGACAABAY KU XIGEENKA DUQA MAGAALADA DIRIDHABE
Kalfadhi uu shalay yeeshay Golaha Baarlamaanka ee Ismaamulka Diridhabe ayaa lagu doortay Ku xigeenka Duqa Ismaamulka magaalada Diridhabe oo lagu magacaabo Axmed Buux.
Jagadan ayaa waxaa hayay Mahdi Giire oo ahaa ninkii Nabadgalyada iyo Xasiloonida keenay magaalada islamarkaana dadka wada dega magaalada Diridhabe ay aad u jeclaayeen.
Mahdi Giire ayaa Waraaqda is casilaadda isagu u gudbistay Baarlamaan magaalada Diridhabe sidaana ay kaga aqbaleen.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay is casilaadda Mahdi Giire ayaa ka dambaysay kaddib culays kaga yimid dhanka Xukuumadda DDS oo lagu qiimeeyay Mahdi Giire, balse lama oga waxa loo cuskaday qiimaynta ee keenay inuu xilka iskaga dago duqu.
Dadka deggan magaalada Diridhabe ayaa si wada jir ah uga soo horjeestay badalida Mahdi Giire oo ahaa Ku xigeenka duqa magaalada Diridhabe.
Ku xigeenka duqa magaalada Diridhabe ee shalay la magacaabay Axmed Buux ayaa sii hayn doona xilkaas ilaa doorashada laga gaadhayo.
RW KUXIGEENKA DALKA OO GAARAY M. BAYDHABO KANA FURAY SHIR
R/Wasaare kuxigeenka XFS Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo Wafdi uu hogaamina yo ayaa Shalay gaar ay M/Ba ydha bo ee Caasimadda KMG u ah maam ulka Koonfur Galbeed Soo maaliya.
Garoonka diyaaradaha Baydhabo ayaa markii uu gaaray R/ Wasaare Kuxig eenka dalka waxaa kusoo dhaweeyay Ma dax ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana waxaa wafdigiisa qeyb ka ahaa Xildhibaano ka tirsan labada Golle ee Baarlamaanka iyo Mas’uuliyiin kale.
Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa M/Baydhabo ka furay Shir hadlayo Arrimaha Gargaarka,waxaana Wariyaha Warbaahinta Dalsan ee ku sugan Hoolka Shirka uu ka socdo uu soo sheegayaa in R/Wasaare Kuxigeenka dalka uu jeedin ayo Khudbad.
Sidoo kale shirka looga hadlayo Arrima ha Gargaarka ee ka socda Baydhabo ayaa waxaa ka qeyb galaya Madax kala duwan iyo xubno ka tirsan Maamulka KGS
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo Shalay ka dhacay duleedka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qaraxaasi ayaa waxaa uu ahaa Miino noo ca dhulka lagu aaso,waxaana qaraxa uu qabsaday gaari ay la socdeen dad shacab ah oo yimid dhanka Degmada Wa lawe yn,kaasi oo Caano u soo waday M/Muq disho,hayeeshee uu haleelay.
Gaariga qaraxa uu qabsaday ayaa wax aa saarnaa 10 ruux oo 2 ka mid ah ay ahaayeen Darawalkii waday Gaarigaas iyo kirishboygii la socday,iyagoona gebi aha an qaraxaas ku geeriyooday,waxaana mid kamid ah dadkaas dhaawac soo gaaray uu u dhintay sida uu xaqiijiyay maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose.
Guddoomiye kuxigeenka Maaliyadda maamulka GSh/Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo la hadlay VOAda ayaa u she egay in qaraxa uu ahaa miino dhulka lagu aasay.
Sidoo kale Cabdifataax Xaaji Cabdulle ayaa sheegay in xiliga qaraxa uu dhacaay ay wadada ay kusoo socdaalayeen gaad iid dhuxul siday,waxaana wadada u dhexe eya Walaweyn iyo Afgooye soo marsiina yay Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaal iya,hayeeshee gaariga ay la socdeen dad ka shacab ahaa uu wadada uga soo horeeyay.
Isaga oo sii hadlaayay Guddoomiye kuxigeenka Maaliyadda maamulka Gobolka Sh/Hoose ayaa waxaa uu tilmaamay in qaraxas la doonayay in lala eegto gaadi dka dhuxusha siday iyo kuwa Ciidamada dowladda.
Mararka qaar ayaa Ciidamada dowla dda iyo kuwa AMISOM waxaa qaraxyo ka la duwan lagula eegtaa Wadada u dhexe eya Degmada Afgooye iyo M/Muqdisho, is la markaana waxaa ka dhasha Khasaaro oyin kala duwan,waxaana Mas’uuliyooda sheegta Alshabaab.
GOLAHA AQALKA SARE EE DALKA OO AKHR INTA 1AAD MARSIIYAY SHARCI MUHIIM AH
Golaha aqalka sare ayaa shalay Akhri nta Kuwaad Marsiiyay hindise sharciyeed ka shirkadaha, kaasi oo ay soo gudbisay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dalka.
Sharcigaan Warshadaha haddii uu meeel maro waxa uu sal dhig u noqon doonaa isku xerka ganacsiyada dalka iyo kuwa su uqyada Caalamka, fududeynta maamul ada, diiwaangelinta shirkadaha ganacsiya ga iyo maalgashiga, waxaana kulanka ma anta ay golaha aqalka sare ku yeesheen xarunta golaha akhrinta kuwaad ku marsiiyeen hindise sharciyeedka warshad aha dalka. Guddoomiyaha Golaha aqalksa sare ee BFSoomaaliya Cabdi Xaashi Cab dullahi ayaa furay kulanka oo shir gudoo minyay, waxaana uu akhiriyaya ajandaha laga doodayo shalay.
Ahmiyada uu u leeyahay dalka ayuu ku ekaa maadaama uu xeer hooseedka uu yahay in ka doodista iyo su’aalo weyd iinta ay tahay akhrinta 2labaada, sidaa daraadeed eng.Cabdullaahi Cali Xasan Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha ayaa ka hor akhriyaya heerarka uu soo maray hi ndise sharciyeedkaan, waxaana uu sheeg ay in la soo geliyay latashiyo farabadan oo ka mid ah hay’adaha dalka.
Kalfadhiga 5Aad kulankiisa 12aad ee golaha shalay waxaa soo xaadiray 29 xubnood, iyadoo uu shir gudoominayay Guddoomiyaha oo ay wehliyaan labadiisa kuxigeeno waxaana soo xeray Gudoomi yaha golaha Aqalka sare mudane Cabdi xaashi Cabdullaahi.
INGIRIISKA OO YEESHAY RA’IISUL WASAARE CUSUB
Boris Jonson ayaa shalay ku guuleys tay inuu noqdo ra’iisul wasaaraha dalka Ingiriiska isaga oo baddali doona Tresa May.
Johnson ayaa sidoo kale noqonaya hogga amiyaha xisbiga muxaafidka haya talada dalka Britain.
Ninkan ku guuleystay xilkan ayaa hor ay usoo noqday wasiir arrima dibadeed ka dalkaas oo loo magacaabay 2016kii wal ow uu markii dambe is casilay 2018 isaga oo ka biya diiddan siyaasadaha May ay ku maareysay galka ka bixitaanka Ingi riiska ee Midowga Yurub.
R/ wasaarahan cusub ayaa horay u ballan qaaday in geed dheer uu u fuuli doono si dii uu dalkiisa uga bixi lahaa Midowga Yur ub markii loo gaaro dabayaaqada bisha Oktoobar ee sanadkan taasoo xoojisay mii saanka tartankiisa.
Johnson oo mar soo noqday duqa M/L ondon ayaa lagu xasuustaa in gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya magaalada as uu ku soo rogay amar uu ku diiday in wax maandooriye ah aan lagu dhex ade egsan Karin.
WAJAALE OO KA CABANEYSA INAAN LAGU SOO DARIN DEGMOOYINKA DARAJOOYINKA LA SIIYAY
Tan iyo intii wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka ismaa mulka gobolada iyo degmo oyinka Somaliland waxa isa soo tarayay degmooyin ka ka cabanaya in aan dal acsiin oo halkii ay waligood joogeen uun lagu daayey.
Inta badan degmooyinka Somaliland ayaa u badan darajooyinka Cd, kuwaas oo doonaya in loo dalacsiiyo B, halka kuwo Bda ahina doonayaan in laga dhigo ( A ), halka qaarkood doonayeen in gobol gaar ah laga dhigo maadaama oo dakhli badan soo xareeyaan.
Degmooyinka cabanayey waxa ka mid ah degmada Caynaba iyo degmada Gabiley oo gobol doonaysay iyo degmada Wajaale oo in kor loo qaado darajadooda doonaysay, maadaama oo suuqa ugu weyn Somaliland ku yaallo.
Sidaas darteed, Magaalada TogWajaale waxay ka cabanaysaa in aan lagu soo darin degmooyinka darajooyinka la siiyey, taas oo ay u arkeen inay xaqireen baarlamaanka iyo xukukuumaduba, Wajaale waxa degmo u magacaabay madaxweyne Siilnaayo, haseyeeshee wax darajo ah malaha, oo laguma soo darin xeerkii maamulka gobolada iyo degmooyinka, taas macnaheedu degmadii waa lagala noqday ayey noqonaysaa.
Magaalada Wajaale hantida taalla meel Somaliland ah oo ay taalla ma jirto marka laga reebo Hargeysa oo caasimadii ah, meel ka dhul qaalisan ma jirto waayo waa goob ganacsi, magaaladdu gabigeeduba waa suuq waana dhuuntii Itoobiya loo marayo ganacsiga, waxaana looyaqaan dekada Qalalan.
Deegaanka Soomaalida Itoobiya dadka looga soo diro lacagta qurbaha waxaa ay ka sariftaan wajaaladda Somaliland waayo way uga qiimo roon tahay ta ay ka sariftaan Itoobiya dhexdeeda, waxaanay Wajaale uga dhigan tahay sida magaalo dhexdeeda baska loo kala raaco waayo jigjiga iyo Wajaale waxay isku jiraan 70km waxaana loo kala socdaa afartan minute, Buska u kala gooshaa JIgjiga iyo Wajaale waxa lagu raacaa 50 bir ah una dhiganta hal dollar, taas baa keentay in Wajaale noqoto xaafad ka mid ah Jigjiga oo daqiiqadii walba ay Busna ka sii baxayaan Busna soo galayaan.
Intii aanay dawladdu u samayn Town planeka suuqadeedu meel kaliya ayuu ku koobnaa imikase wadooyinkii laga dhex saaray dhinac walba way u fuday, xukumadda Muuse Biixi ayaa dhowan qorshaysay oo wadooyin waaweyn u samaysay, siday qorsheynta magaaladu u qaaliyeysay dhulkii, waxa tusaale inoogu filan arrintan, Muwaadin baa inta aan la qorsheyn jago ka iibsaday waxa uu siistay 45,000 dollar, markii dib loo qorsheeyey magaaladii ee wadooyin waaweyn laga dhex saaray ninkii dhulka iibsaday wuxuu dhulkiisii u noqday mid laba waddo midba dhinac ka maraan oo dhulkiisii bay wadooyinkii u qaali gareeyeen, waxa uu dhowaan siiyey dhulkii 160,000 dollar wuxuu ka faa’iiday billo kooban (115,000 dollar), ma jirto meel Somaliland ka mid ah oo dhulkeedu qiimahaasi leeg yahay.